जिऊँदी नर्मतालाई जवर्जस्ती मार्न खोजेको दर्दनाक कथा - JagaranPost
Home/प्रदेश ५/जिऊँदी नर्मतालाई जवर्जस्ती मार्न खोजेको दर्दनाक कथा
देश यस्तो छ । यो घटना धेरैलाई एउटा कथाजस्तो लाग्छ, तर यो वास्तविकता हो पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-१ की नर्मदा ज्ञवाली । स्थानीय प्राविमा पियनको काम गरेर परिवार चलाउने उनी राष्ट्रिय महत्त्वको पात्र बन्ने कुरो भएन । देशको प्रशासनलाई यस्तो खबरले छोएन । राजनीति गर्नेले अमेरिका र भेनेजुएलाको कुरो गर्ने हो, यस्तो विषयमा के बोल्नु र ! मिडियामा यो विषय आयो तर लौ मरेको बिरामी ब्यूँतियो भन्ने खालको मेसेज बोकेर आयो । त्यसले कसरी गरिबीले मानवताको घाँटी थिचिरहेछ भनेर विश्लेषण गरेन । जिउँदै घाट लैजाने प्रपञ्चमा परिबन्द नै सही, अपराधको गन्ध छ कि भन्ने कसैले सोचेन । स्कुल विभाग कसले पाउने भन्ने विषय राष्ट्रिय विषय बन्यो तर एउटा झाड़ापखालाको उपचारसम्म नपाएर कसरी एउटा नागरिकको मिर्गौला नै बिग्रिनेदेखि मृत्यु नै हुनेसम्मको घटना घट्न पुग्छ भन्ने विषय बनेन । कसरी एउटा गरिब परिवारले गरीबीकै कारण जिउँदै अस्पतालबाट बिरामी झिकेर घाट लैजान्छ भन्ने कसैले बहस गरेन । ती महिलाले यसबीच झाड़ापखालाकै कारण कति शारीरिक र मानसिक पीड़ा बेहोरिन् होला भन्ने कसैले सोचेन ।
देश जताततै यस्तै छ । देशलाई देशजस्तै देख्ने, बोल्ने र योजना बनाउने व्यक्ति चाहिएको छ । नर्मदाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना !
(नारायण गाऊँलेको फेसबुक वालबाट साभार)